Maxaa Hor Taagan In La Dhiso Ciidan Awood Leh Oo Soomaaliyeed? – Somali Top News
Maqaalo Warar Af Soomaali
(STN-MUQDISHO):_Baraha bulshada iyo doodaha ugu weyn ee hadal haynta dadku u badnayd ayaa ah hadal uu yiri kornayl ka tirsan askarta Uganda ee qaybta ka ah AMISOM oo la hadlay wargayska Foreign Policy, isagoo yiri “Soomaaliya waa sidii doofaar la dhaqayo oo kale, waad dhaqaysaa misna wuu wasakhoobayaa”.
Hadalkaas wuxuu qayb ka ahaa qormo dheer oo wargaysku uu ku lafa guray arrimaha amniga ee Soomaaliya, isagoo sarkaalka Uganda u dhashay uga gol lahaa in amniga Soomaaliya ay culays weyn ku qabaan.
Foreign Policy wuxuu soo xigtay afhayeenkii hore ee wasaaradda amniga oo ka hadlaya arrin kale oo muujisay in shisheeyuhu aysan aaminsanayn Soomaalida “shaki iigama jiro in Al Shabaab ay ku dhex milmeen xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya oo ay noqdeen laba kaarleyaal” ayuu yiri C/casiis Xildhibaan oo wargayska u warramayey.
Shakigaas waxaa sii xoojiyey la taliye ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga oo wargayska u sheegay in “ay tahay sir furan (cid kasta ogtahay) in xubnaha xukuumadda, iyo xataa xubnaha beesha caalamka ay kiraystaan Al Shabaab, si ay u dilaan ama u cabsi galiyaan qolyaha uu xafiiltanku kala dhaxeeyo”.
Wuxuuna wargaysku ku soo gabagabeeyey qormadiisa oo dheer la taliyaha oo leh “halkan, ciidan waad ka iibsan kartaa. Si jamac ah, haddii aan nahay beesha caalamka, waxaan muddo sanooyin ah taageeraynay shabakad dambiilayaal ah”.
Jarmalku wuu joojiyey taageeradii xagga tababarka, misna midowga Yurub wuxuu bil kasta ku taageeri jiray AMISOM $23 Malyan ilaa 2016kii, ayagoo sannadkiina $35 Malyan ku bixinayey tababarro.
Haddaba Sababaha uu u dhismi la’ yahay ciidan Soomaaliyeed oo waxtar leh ayaa BBC Somali waxey weydiisay Jeneraal Cabdulqaadir Cali Diiriye (Subxaanyo) oo ka mid ahaa saraakiishii ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya, lana soo shaqeeyey qaar ka mid ah dawladihii dalka ka jiray burburkii ka dib. Laba sababood ayuu u aanaynayaa.
– Siyaasadda xagga ciidamada ee Soomaaliya oo aan qeexnayn.
– Dunida oo aan daacad ka ahayn in uu dhismo ciidan awood leh oo Soomaaliyeed.
Jeneraalku wuxuu aad uga niyadxun yahay in “adduun weynaha iyo gobolka aysan diyaar u ahayn in Soomaaliya ay yeelato ciidan waxtar leh”.
“Mashruuc baa nagu socda. Xataa Turkiga oo ah saaxibka ugu fiican ee aan leenahay, looma ogola inuu wax nala qabto” ayuu sii raaciyey.
← Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Dalka Kanada Oo Dowladda Soomaaliya Ku Dhaliishay Go’aankii Ay Qaadatay
Ciidamada Federalka Itoobiya Iyo Kuwa Liyuu Boolis Oo Qarka U Saaran Iney Dagaalamaan →
Daaawada ilkaha lagu cadaydo ee Colgate oo cudur halis ah lagu sheegay
Dowladda oo ka digtay Fatahaad hor leh oo Soomaaliya ku soo foodleh
Deg Deg: Dagaal u dhaxeeya ciidamo kala taabacsan Waare iyo Dabageed oo ka qarxay Hiiraan